UBabyface ulungiselela ukuvikela isicoco sakhe | Scrolla Izindaba
UBabyface ulungiselela ukuvikela isicoco sakhe
Umfana wegolide waseNingizimu Afrika, uMoruti “Babyface” Mthalane, uzondizela e-London ngoLwesibili ngaphambi komdlalo wakhe wokuvikela isicoco se-International Boxing Federation (i-IBF) flyweight ngoLwesihlanu.
UMthalane uzobe elwa noSunny Edwards wase-Northern irish, ozoqala ukudlalela isicoco, e-London.
Utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi ikhempu yakhe ithathe isinqumo sokunqamula e-Tunisia ukugwema umvalelo waseNgilandi wezinsuku eziyishumi, obhekene nabagibeli bezindiza abasuka eNingizimu Afrika.
Lo mpetha wesibhakela ozinze eGoli uthe amalungiselelo ahamba kahle ezweni elisenyakatho ne-Afrika.
“Njengoba besingafuni ukunikezwa igunya lezinsuku eziyishumi zomvalelo, sabona kungcono ukuthi simise ikhempu e-Tunisia. Isimo sezulu nolwandle kube mnandi. Umqeqeshi wami uCollin Nathan ubesebenza kanzima nami ukwenza kahle izinto ezimbalwa, ”kusho leli qhawe elineminyaka engama-38 lase-KZN.
Unerekhodi lokunqoba amahlandla angama–39 (ama-knockout angama-26) nokuhlulwa okubili, futhi wathi ngeke amthathe kancane u-Edwards ngenxa yerekhodi lakhe elingathandeki.
Lo mshayisibhakela wase-Brithani oneminyaka engama-25 uqophe ukunqoba okuyi-15 ngama-knockout amane.
“Ngimfundile ngamavidiyo. Akayena umuntu odonsayo kodwa ngimulungele yena, ”kusho uMthalane, ozobe esevikela okwesithathu.
UMthalane uyena kuphela umuntu waseNingizimu Afrika ophethe isicoco esivela enhlanganweni ehlonishwayo yokujezisa abantu, njenge-IBF.
Impi yangoLwesihlanu izobe ise-York Hall e-Bethnal Green.